IEFPA ACEEM – ACEEM
IEFPA ACEEM : Institut d’enseignement et de formation professionnelle Agrée.
Sampana iray eo anivon’ny vondrom-panabeazana aceem. Miorina etsy Ambatomitsangana Ankadifotsy, ary mitantana azy Ramanambintana Richard. Misampana telo ny fampiofanana sahanin’ny IEFPA ACEEM dia ny formation professionnelle, ny Lycée Technique ACEEM ary Ny Institut Supérieur de Gestion informatisée. Hita eto amin’ny IEFPA Aceem avokoa ny labo de langues, ny sale d’informatiques, ny infirmerie ho amin’ny vonjy voina ary ihany koa ny buvette hanala fahasahiranana ireo mpianatra lavi-podiana.
Ankoatry ny Cours izay antom-pisian’ny ACEEM tany am- piandohana sy ny fampianarana ankapobeny toy ny IEF ACEEM dia efa nisy ihany koa ny fampiofanana arak’asa tamin’ny taona 1988 izay nahitana ny làlam-piofanana Informatique, bureautique ary ny programmation. Niampy ny cuisine sy patisserie ny taona 1995. Koa satria niseho lany hatrany ny filàn’ny tanora izany hoe fiofanana hiatrika asa avy hatrany izany, dia nitatra hatrany ny làlam-piofanana nosahanina ary dia niforona ny anarana hoe IEFPA ACEEM ny taona 1998. Nisandrahaka ho amina sehatra maro ny fampiofanana: Comptabilité generale sy ny comptabilité informatisée, ny technique de secretariat, ny commerce international, ny marketing et gestion commercial informatisée, ny langue anglaise sy française, ny coupe et couture, ary ny elegance et beauté ahitana ny coiffure esthetique.
Eo amin’ny fampiofanana arak’asa dia mamoaka mpianatra manodidina ny 800 hatramin’ny 1.200 isaky ny andiany ny IEFPA ACEEM, ka Andiany 2 isan-taona no havoaka amim-pomba ofisialy amin’izany.
Ny Lycée technique Aceem. Niorina ny taona 2001 ka ny làlam-piofanana G2 no hita ao; misy ny classe de seconde G2, ny 1ère G2 ary ny terminale G2 izay hakana ny bakalorea professionnel sy ny bakalorea technolojia.
Ny Institut Supérieur de Gestion Informatisée, niorina ny taona 2010. Ivon-toerana fampianarana ambony ahazoana ny diplome de technicien supérieur na ny bacc + 2 diplaoma omen’ny minisiteran’ny fampianarana teknika sy fampiofanana arak’asa ary nahazoana fankatoavana avy amin’ny function publics. Eo ihany koa ny Bacc + 3 dia ny diplaoman’ny Licence professionnelle omen’ny Minisiteran’ny fampianarana ambony ary nahazoana fankatoavana avy amin’ny Min.FOP. Ireo mari-pahaizana ireo dia midika fa sekoly nahazo ny fankatoavan’ny fanjakana ny IEFPA ACEEM. Eken’ny Minisiteran’ny function publics ary nahazo ny antsoina hoe habilitation eo amin’ny Minisiteran’ny fampianarana ambaratonga ambony. Natao handraisana ny mpianatra manana ny mari-pahaizana Bakalorea Sokajy rehetra ny Gestion management Informatisée
Sampana iray ao anatin’ny vondrom-panabeazana ACEEM naorin’Atoa Ratrema William. Sekoly ambaratonga ambony niorina ny taona 2008, ary raha nanomboka tany amin’ny taona 2011 ny Andiana mpianatra voalohany nivoaka tao aminy dia efa mandia ny andiany fahavalo izany ankehitriny.